Salesflare: Iyo CRM YemaBhizinesi Madiki Uye Matimu Ekutengesa Anotengesa B2B | Martech Zone
Salesforce Dreamforce | Virtual Conference | Zvita 9, 2021
Salesflare: Iyo CRM yeMabhizinesi Madiki uye Matimu Ekutengesa Anotengesa B2B
Chipiri, Mbudzi 16, 2021 Chipiri, Mbudzi 16, 2021 Douglas Karr
Kana iwe wakataura kune chero mutungamiri wekutengesa, kuita kwevatengi hukama manejimendi (CRM) chikuva chinhu chinofanira… uye kazhinjiwo musoro. The mabhenefiti eCRM Kupfuura mari uye matambudziko, zvisinei, kana chigadzirwa chiri nyore kushandisa (kana kuti chakagadziridzwa kumaitiro ako) uye timu yako yekutengesa inoona kukosha uye kutora uye kuwedzera tekinoroji.
Sezvizhinji zvematurusi ekutengesa, pane musiyano muhombe muzvinhu zvinodikanwa kune diki, bhizinesi rinokurumidza kupfuura kambani yemabhizinesi epasi rese. Kana iwe uri bhizinesi diki rinoshandira musika weB2B, Salesflare ine zvimwe zvakasarudzika maficha anoita kurerwa uye kushandisa zviri nyore… uye ita kuti timu yako yekutengesa ione mabhenefiti uye kukoshesa chikuva.
Salesflare: Zviri Nyore-Ku-Kushandisa CRM
Salesflare ndiyo yakangwara, yemazuva ano CRM yebhizinesi diki. Kana iwe wakaneta nekupinda nemaoko data yevatengi uye kushandisa nguva uchitenderera yakaoma sisitimu, Salesflare inogona kunge yakakunakira. Salesflare inobatanidza zvakatsvinda nemaakaundi ako ebasa, kuwiriranisa maemail, misangano, siginecha yeemail, email yekutevera uye nezvimwe.
Ronga kuedza kwako kutengesa nezvinhu zvinotevera:
Zvese munzvimbo imwe - bhuku rekero, nguva yekutaurirana, mabasa, mafaera, mapaipi uye nezvimwe.
Visual pipeline - yakajeka, inogadziriswa maonero ekutengesa kwako funnel.
Mabasa & mazano ebasa - usambodonhedza bhora pakutungamira zvakare.
Kugoverana kwechikwata - shanda pamwe nechikwata chako zvisina mhosva.
Custom minda -Chengetedza nezvese data revatengi raunogona kufungidzira.
kutsvaka -wana zvese zvaunoda ipapo ipapo.
Live zviziviso -wana zviziviso zvemazuva ano chero nguva, chero kupi, pane chero chishandiso.
Insights dashboard – tenzi nhamba.
Gadzirisa maitiro ako ekutengesa kuti uwane zvakanyanya kushanda zvakanaka:
Otomatiki kero bhuku -Otomatiki zvizere kuonana kwako uye ruzivo rwekambani - mira manyore ekupinda ekusangana uye data yekambani.
Automated timelines - nguva yako inowiriraniswa neemail yako, misangano yekarenda uye nhoroondo yekufona.
Automated file repository - Chengetedza maforodha ezvinyorwa zvevatengi vako zvisingaite.
Nguva ine zvigadziriso zve Twitter -gara uine nhau dzichangoburwa pane vatengi vako kuburikidza nemagariro avo.
Tumira otomatiki maemail zvichienderana nezvinokonzeresa - ita otomatiki yako email yekutevera zvichibva pane zvinokonzeresa zvaunogona kumisa zvakananga muCRM.
Kuvandudza kutaurirana kwako uye kutyaira kutengesa kwakawanda uchidzikisa kutenderera kwekutengesa:
Email uye webhu tracking -wana mufananidzo uzere wekuti vanotungamira uye vatengi vari kufambidzana nekambani yako.
Relationships - ona zviri nyore kuti vaunoshanda navo vanotoziva - uye ndiani wavanoziva zvakanyanya.
Lead zvibodzwa/hotness chenjedzo - tsvaga uye tungamira kutungamira kwako nekuzivisa kwekupisa.
Maemail akawanda - tumira ega ega ekutevera maemail pamwero.
Batanidza iyo CRM kune mamwe mapuratifomu ako:
Etsamba dzeparutivi dzeGmail & Outlook - shandisa Salesflare usingasiye email yako inbox.
Mobile app ye iPhone & Android - Chekupedzisira, CRM app inopa kushanda kwakazara kubva pafoni yako.
VAMWE API - zviri nyore: Salesflare's API inogona kubatana kune chero imwe app.
1000+ kubatanidzwa - Salesflare inopa yemuno kubatanidzwa uye kuwana kune 1,000+ app yekubatanidza kuburikidza Zapier pamwe chete nekuzvarwa.
Edza Salesflare Yemahara
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Salesflare.
Tags: Android crmb2bb2b crmhombe yekutengesa maemailCRMcrm inobatsiraiosiOS crmlead alamaLinkedInMobile Anwendungmobile crmzvizivisomataridzikiropombi yekutengesamabasa ekutengesasalesflareBhizinesi dukubhizinesi diki crmzapier
Simba reData: Masangano Anotungamira Anowedzera sei Dhata seAnokwikwidza Advantage
5 Zvekufunga Paunenge Uchisarudza Cloud Storage Kuwedzera Kudyidzana Uye Kubudirira
Sarudza zita rekushandisa.
Imwe-nguva yekunyoresa mari yekuwana saiti kumaforamu uye zvekutanga zvemukati uye zvinopihwa. (USD)
Yakatsigirwa Kiredhiti Kadhi: American Express, Tsvaga, MasterCard, Visa
Kadhi Nhamba Mwedzi010203040506070809101112 Gore20222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041 Zuva rekupera Security Code Zita reKadhi